Wararka - Isbadalka Dijital ah ee RIU waqtiga COVID-19
Silsiladda 35aad ee adduunka ee RIU waxaa lagu aasaasay Mallorca qoyskii Riu 1953 oo ah shirkad yar oo fasax ah, iyadoo la furay hudheelkeedii ugu horreeyay ee magaalada 2010, RIU Hotels & Resorts waxay hadda leeyihiin 93 hudheel oo ku yaal 19 dal oo soo dhaweynaya in ka badan 4,5 milyan oo marti ah sanadkii.
Laga soo bilaabo sumadihii duugoobay ilaa ZKONG Cloud ESLs
Iyada oo qayb ka ah wadideeda si loo hagaajiyo khibrada macaamiisha xilligii COVID-19, RIU silsiladda hoteelka ayaa raadineysay habab lagu wanaajiyo muuqaalka iyo dareenka maqaayadaha, laguna hubiyo awoodda lagu soo bandhigo macluumaadka ku saabsan cuntada oo ku qoran luuqado badan laakiin sidoo kale ixtiraam kala fogaynta bulshada. Ka sokow RIU waxay doonaysay inay yareyso waqtiga iyo qiimaha cusbooneysiinta menusyada.
Abensys, lamaanaha aan ku kalsoon nahay ee Isbaanishka ah ee bilaabay mashruucan, ayaa sheegay in la dhexgalka nidaamyada RIU ee loo maro API-ga ZKONG uu ahaa mid fudud. Sidoo kale dhammaan ZKONG ee 'ESLs' oo wada socda oo ku wada socda kan ugu amniga badan, ugu dhaqsaha badan isla markaana isku madal ah, oo loo adeegsan karo adduunka iyadoo aan la rakibaynin, shaqaalaha iyo martida ayaa ku nasan kara in macluumaadka cuntada lagu haayo luqado kala duwan isla markaana la cusbooneysiinayo waqtiga dhabta ah.
· Rakibaadda deg deg ah oo fudud
· Muuqaal cad oo muuqda
Adeegyada aan lala xiriirin
· Hawlgal aan warqad lahayn
· Xulashooyinka aan xadidneyn ee naqshadeynta waxyaabaha
Waqtiga boostada: Oct-22-2020